Days Hotel nke Wyndham na-abịa New Zealand
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Days Hotel nke Wyndham na-abịa New Zealand
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ ọhụrụ New Zealand • News • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Days Inn site Wyndham bịara New Zealand na mmeghe nke ụlọ nkwari akụ ọhụụ, Days Hotel & Suites nke Wyndham Hamilton dere.
Mgbakwunye ahụ mere ka ọnụnọ ụlọ ọrụ ahụ dị na New Zealand na Hamilton, obodo nke anọ kachasị n'ọnụ ọgụgụ mpaghara ahụ na ahịa mmepe isi. Kemgbe Eprel 1, 2018, Wyndham emepeela ụlọ nkwari akụ 34 na South East Asia na mpaghara Pacific Rim, atọ n'ime ha na-ebu ọkọlọtọ Days Inn. N'ụwa nile, akara a nwere ihe karịrị ụlọ nkwari akụ 1,700 gafee mba 25.
Hotellọ nkwari akụ ọgbara ọhụrụ edobere na ụlọ akụkọ ihe mere eme nke narị afọ nke 19 na akuku Hamilton nke Collingwood na Victoria n'okporo ámá, Days Hotel & Suites nke Wyndham Hamilton bụ nke Giarn Family Trust ma na-arụzigharị ihe dị mkpa ugbu a iji gosipụta ụlọ mmanya ọhụrụ, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ. na ebe nnabata.
Joon Aun Ooi, onye isi oche na onye isi njikwa, Wyndham Hotels & Resorts, South East Asia na Pacific Rim kwuru, sị, "Days Inn by Wyndham bụ otu n'ime ụdị ụlọ nkwari akụ kachasị ewu ewu n'ụwa na-eweta ọbịa na-ekpo ọkụ, na-anabata ma na-atụkwasị obi nye ndị njem kwa ụbọchị n'ofe ụwa." . “Comingnabata Days Hotel & Suites site na Wyndham Hamilton na obodo a dị mkpa North Island, mpaghara ebe akara ahụ ga-asọmpi n’ime mpaghara nkwari akụ nke midscale, na-egosi nnukwu ihe dị mkpa na atụmatụ mgbasawanye ụwa anyị.
Ọ gbakwụnyere, “Hamilton bụ ebe e guzobere maka azụmaahịa, mana enwere ụdị ụlọ nkwari akụ zuru ụwa ọnụ na Central Business District iji kwado mgbasawanye azụmahịa nke obodo na mmepe ụlọ ihe nkiri. Giarn Family Trust bụ ezigbo onye ọlụlụ ma anyị na-atụ anya ibuli onyinye nnabata Hamilton site na mgbakwunye ọhụrụ a. ”
N’oge gara aga, a na-akpọ Sudima Hamilton Hotel, ụlọ bidoro na 1876, ụbọchị ugbu a Days Hotel & Suites nke Wyndham Hamilton na-enye ime ụlọ ebe ndị ọbịa iri isii na itoolu na-egosi ọtụtụ ihe eji enyere ndụ aka, gụnyere Wi-Fi dị mma, ikuku ikuku na-ejide onwe ya na kpo oku. , telivishọn dị larịị, na ụlọ ịsa ahụ ndị na-enwe gburugburu ebe obibi. Tụkwasị na nke ahụ, a na-etinye thelọ ihe nkiri na ime ụlọ ime ụlọ nwere mbara ihu ndị a kwadebere nke ọma, na-enye ndị ọbịa ohere ịnabata echiche na ụda Victoria Street na-ekwo ekwo. Ndi na asa-akwa, alọ ebe mgbako na ebe a na adọba akwo-ukwo ebunye
Site na isi obodo ya, ndị ọbịa na-esite na Waikato Museum na SKYCITY Hamilton, ebe Claudelands Park na ogbako ọgbakọ obodo ahụ dị nso na-adịghị anya. Ndị ọbịa nwekwara ike ịnụ ụtọ ịgagharị site na Hamilton Gardens, gbaa egwuregwu egwuregwu na Seddon Park, lelee rugby na FMG Stadium Waikato, were ihe ngosi na The Meteor Theater ma ọ bụ gaa ụmụ anụmanụ na Hamilton Zoo.
Days Inn nke Wyndham na enyere ndị ọbịa aka ijide ụbọchị ndị ahụ, ebe ọ bụla njem ha na-ewe ha. Na mgbakwunye na Days Inn site na Wyndham aha, ika ahụ nwekwara ikike ịkwụ ụgwọ n'okpuru aha Days Hotel site na Wyndham na Days Hotel & Suites nke Wyndham, n'etiti ndị ọzọ. N'ofe New Zealand, Wyndham na-arụzi mkpokọta ụlọ iri na ebe ntụrụndụ iri na ọtụtụ ebe dị mkpa, gụnyere Auckland, Queenstown, Wanaka, Christchurch, Rotorua na Taipa. Days Inn site na Wyndham ghọrọ ụdị nke atọ dị iche iche nke ụlọ ọrụ na mba ahụ, na-esote Ramada® nke Wyndham na Wyndham Garden®.
Inbọchị njem site na Wyndham ụlọ oriri na ọ participateụ participateụ na-esonye na Wyndham Rewards®, mmemme mmesapụ aka kachasị n'ụwa niile nwere ihe karịrị ụlọ nkwari akụ 30,000, ebe ezumike klọb ezumike na ezumike ezumike n'ụwa niile. Ezubere maka onye njem kwa ụbọchị, ndị otu a na-enweta akara 1,000 ejiri n'aka yana ezumike ọ bụla nwere ike ịgbapụta isi maka ọtụtụ ụgwọ ọrụ, gụnyere abalị efu, kaadị onyinye, ngwa ahịa na ndị ọzọ.
ụdị eweta ụlọ kaadị catch Central Center Century Christchurch klas club azụmahịa otito ogbako nkuku nte ugbu a ụbọchị e mere anya District Downtown ịnya ụgbọ East East Asia guzobere kwa ụbọchị magburu onwe mgbasa ụlọ ọrụ ezinụlọ feature atụmatụ egosi ọkọlọtọ ewepụghị -esonụ -atụ abali n'efu enyi na enyi full Garden ubi mmesapụ aka onyinye mgbasawanye zuru ụwa ọnụ n'ụwa nile Globe Hamilton Inyere aka akụkọ ihe mere eme Brandslọ nkwari akụ hotels na ntụrụndụ -ije Key mara ịrịba ama ọhụrụ Limited ọnụ ụlọ ebe ndina ezumike isi Ijikwa onye isi akara egwuregwu nzute òtù ukwu oge a ngosi nka aha aha New Zealand ehihie na abalị North mme uwa -enye meghere Pacific park adọba ụgbọala soro onye Ugochukwu ihe adịchaghị ọnụnọ Prime onwe omume ruru eru nso n'ikuku gbapụta pụrụ ịdabere na ya ụgwọ ntụrụndụ restaurant ụgwọ ọrụ ụgwọ ọrụ mmemme ụlọ sinik nke iri na isi Nịm obere show dị ịrịba ama South East Asia ámá egwuregwu -anọ atụmatụ Street oke ime ọkọnọ Mpaghara nkiri mkpokọta Onye njem ndị njem njem ezumike ezumike ezumike Victoria anabata Wi Wi-Fi ogo ụwa n'ụwa Wyndham Zealand zoo